Kuwa Soomaalinimadii Sharafta Lahayd Ka Doortay Hawiyinimo Aan Meelna Gaynayn Sow dhab Ma ahan?!!!.
Somaliya maanta meesha ay taalo cid aan idinka ahayn oo dhigtay ma ay jirto. Maxamed Siyaad subaxduu ka baxay Muqdisho, magaaladi iyo dalkii uu ka tagay darxumo haka jirto, laakiin dal jira oo wax walba leh ayuu ahaa. Labadii nin ee idinka iniga dhashay soomay ku tumaan magaalada dhamayd ee Muqdisho. Soow isma aydaan ceebayn oo maanta ummada Soomaaliyeedna maydaan ceebayn.
Hawiyaw waad ceebaysantahay. Adigu dadkii Soomaaliyeed intii nadiifta lahayd ee sharafta lahayd ee kasoo jeeday Qabiilka Hawiye waad ceebaysay. Soomaalina waad ceebaysay, oo waa adiga, adiga, (you) midka ka masuulka ah meesha ay maanta Somaliya xoorantahay.
Mar hadaad Hawiye ahaan u haamooteen oo intaad been isku akhriseen uu idin galay damac ah inaad kaligiin yeelataan maamulkii Dawladnimo ee ay wadajir ahaanta ku lahayd dhamaan ummada Soomaaliyeed meel kasta oo ay kala joogto oo aad waliba wax maamuli weydeen oo aad noqoteen dad wax ay haleeyaan ama burburiyaan mooyee aan wax hagaajin karin.
Hadaad haamooteen oo uu damac ilaa iyo heerkaas ah ini galay iyo inaad damacdaan inaad kaligiin wax hantidaan, aaway! war aaway! Aaway Dawladnimadii Ummada Soomaaliyeed? Maanta sawta 18ka sano la marayo ma aha? Aaway dalkii la oran jiray Soomaaliya ee aduun waynuhu oo dhan la macaamiloon jiray ee iska lahaa dayuuradaha, hay,adaha, iyo safaaradaha dibedda ka matala.
Wax la idinka dhagaysanayo ma aha waynu is dilnay oo markii horeba ileen waxa ini waday hunguri iyo xukun doon uun bay ahaydee, waxaasi waa sheeko caruureed.
Midda kale, waan is xoraynay oo reerka Daarood la yidhaah baanu iska xoraynay 1991 oo waa cayrsanay iyo sheeko caruureedka meelahas lagu wadwado, soo ceeb idinkuma aha? Yaa marka horeba adiga ku haystay? Maxaa beenta la isugu sheegi?
Magaalada Muqdisho dadkii Huteelada, bakhaarada, iyo makhaayadaha ugu waawayn ku lahaa soo adiga ma ahayn, sawtii xitaa madaxdii ka ag dhawayd Maxamed Siyaad ay adiga baararkaaga iman jireen, iyagoo darajo sare moodaya in ay fadhiistaan maakhaayad ay leeyihiin Hawiye.
Huteelada iyo maalka iyo nimcadaas aad cid walba kaga badsateen, inta aad hesheen soo ma ahayn intuu Maxamed Siyaad xukunka qabsaday?
Ninkii Madaxweynaha ahaa ee markii aad ku dan gaarteen aad tiraahdeen Daarood buu ahaa, soo ma ahayn midka wax kasta idiin sameeyay? Yaa Maxamed Siyaad ka hor oo Hawiye ahaa oo maal lahaa?
Sawtii aysan jirin adiga cid kaa Wasiiro iyo madax badnayd?? Mareexaankii dhamaa ee wiilkoodii Maxamed Siyaad Dawladnimada 21ka sano hayay soowtii ay halka Wasiir kaliya iska lahaayeen ma aha? Cabdiraxman Jaamac Barre mooyee, goormuu Mareexaan Wasiir kale lahaa.
Wixii shalay iyo maantadan la joogo Dawladu dhiseysay soow magaalooyinkiini iyo degaankiini ma ahayn? Boqolaalkii ahaa dugsiyo iyo kuwo kaleba meelihii laga hir galin jiray soo Banaadir, Hiiraan, iyo Jubooyinka aad degtaan ma ahayn?
Sawtii mashruuc walba oo ummada Soomaaliyeed loogu deeqo deegaankiina laga hir galin jiray ma ah? Waxaas oo nimco iyo maal ah ee niliigu deeqay ma Soomaalinimo ayeey ahayd mise Hawiyinimo?
Woqooyiga dhan oo aan anigaygani kasoo jeedo, oo dadkiisi wax bartay halgan aysan u baahnayn iney dhiig Soomaaliyeed ku daadiyaan oo ay dadkoodina ku kacaan, waxa galiyay ee ay ka muraara dilaaceen iyo Soomaalinimadii ay ka niyad jabeen iyo iney goostaan waxa ku kalifay soo markii doqonkii Madaxtooyada fariistay ee Maxamed Siyaad uu warshad iyo mashruuc walba Koonfur ka hirgaliyay ma aysan ahayn?
Kumanaankii qaxooti ahaa ee maanta aduun waynuhu gurtay ee maanta ku sugan Yurub iyo arli shisheeye ah oo dhaxan badan oo dhibaato badan, yaa aakhara iyo aduunba ka mas,uul ah arrintaas?
Qabiilada Soomaaliyeed qabiilka ugu magacyada badan leh ee ah tuuga, mooryaanta, qabqablaha, qaran diid iyo qaran dumiska soo idinka maaha. Soo idinka maaha dadka ay Soomaaliya ka degi la,dahay? Soo idinka maaha dadka Somaliya maanta meesha ay xoorantahay dhigay?
Dadka maanta ugu ururo iyo kooxaysi iyo maleeshiyo badan leh soo idinka maaha?
Dadka ay maanta Madaxweynenimada ummada Soomaaliyeed kabahu kaga dhamaadeen soo idinka maaha? Waxay la mid tahay nin indha la, oo guri mugdi ah oo qolol tiro badan ka kooban mukulaal madaw ka raadinaya!
Hawiyaw! Maanta cidda aad wax u sheegi kartaan oo idin ka akhrisanaysaa waa ciddma?
Sowtii xitaa Mooryaanka aad baadiye ka soo waasheen si aad itaal uga dhigataan ee aad kusoo hawl galiseen Xamar, oo guri walba oo Daarood leeyahay ayaan soo furanaysaa aad isugu sheekayseen.
Waxa maanta ku haysta ee aad aduun iyo aakharaba u seegtay ee aad cid walba aduun iyo aakhara u seejiseen soow ma aha xigmadda Soomaaliga ah ee leh: Wax badso wax beel ayeey dhashaa!
Walaaladaydaas hungurigu qaaday ee Hawiye waxaan oran lahaa ka waantooba riyada khayaaliga ah ee aad isugu sheekayseen, qofna ma doorto ficil xun oo shaydaan, sababto ah waaba wax xun. Laakin qofka dooranaya waa qof ku khaldamay oo wanaagi uu raadinayay ugu khaldamay, farxadii uu raadinayay oo la gashay ficil shaydaan. No man chooses evil, becouse it is evil, he only mistakes it for happines, the good he seeks!